Overview rehetra Downloads Fampidinana farany Fampidinana malaza Microsoft Flight simulator 2020 - SCENERY - - Fitantanana ny tany - - Frantsa - fiaramanidina - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Airbus - - Fiaramanidina taloha - - Mpiady - - Cessna - - Gliders - - Zlin Aviation - Fitaovana FSX - Prepar3D - AIRRCRAFT - - fiaramanidina (isan-karazany) - - Airbus - - Boeing - - Whole fleet of aircraft - - Old fiaramanidina - - Fighter - - Antonov - - Tupolev - - Socata - - Hawker Beechcraft - - McDonnell Douglas - - Bombardier Aéronautique - - Seaplane - - Lockheed Martin - - Patrouille de France - - De Havilland - - Embraer - - Cessna - - North American Aviation - - Gliders - - Britten-Norman - - ATR - - Grumman - - Pilatus - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - HELIKOPTER - - Various angidimby - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Piasecki PHC - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Airport - VARIOUS - - Projects, prototypes - - Fanovana - Tools - Paywares Flight simulator 2004 - AIRRCRAFT - - Aircraft (Uncategorized) - - Airbus - - Boeing - - Ny sambo manontolo manontolo an'i Frantsa - - Patrouille de France - - North American Aviation - - De Havilland - - Hawker Beechcraft - - Embraer - - Seaplane - - Old fiaramanidina - - Bombardier Aéronautique - - Cessna - - Rosiana mpiady - - French mpiady - - Various mpiady - - Antonov - - ATR - - Gliders - - Britten-Norman - - Tupolev - - Frantsay Vokovoko Mena - - Lockheed - - Pilatus - - Lockheed Martin - HELIKOPTER - - Hélicoptères (mpanjono) - - Eurocopter - - Bell Aircraft Corporation - - Sikorsky - - Aerospatiale - SCENERY - - Various toerana tsara tarehy - VARIOUS - - Fanovana - - Projects, prototypes X-Plane 10 - X-Plane 10 fiaramanidina - - Fighter - - Various fiaramanidina - angidimby - - Various - Various Special Puzzles Free X-Plane 9 - X-Plane 9 fiaramanidina - - Airbus - - Old fiaramanidina - - Various fiaramanidina - angidimby
Ny fisintomana rehetra ho an'ny Preprar3D v2
Noforonina 26 Oct 2021
Nohavaozina taminy 26 Oct 2021
Excellent add-on ho an'ny stimulator sidina Prepar3D v1 sy v5 FSX (ny version). Ity dia maimaim-poana add-on modely amin'ny AlphaSim (Virtavia ankehitriny) miaraka amin'ny maodely teratany sy cockpit virtoaly ho an'ny FSX / P3D.
Avy amin'ny Models avy amin'i AlphaSim. FSX fiovam-po teratany nataon'i YT (aka anon ?). Ny sasany dia nataon'i Danny Garnier. Fanovana nataon'i Flanker256. Fanovana bebe kokoa nataon'i Rikoooo
Noforonina 1 Oct 2021
Nohavaozina taminy 1 Oct 2021
Ity ny Ilyushin Il-62M ho an'ny FSX ary Prepar3D v1 hatramin'ny v5, andao tsy hatahotra teny, ity add-on sangan'asa! Noforonin'ny ekipa Project Tupolev malaza, tsy misy tsara noho ny zava-misy amin'ny fiaramanidina sovietika.
Nosoratan'i Project Tupolev
Noforonina 27 Sep 2021
Nohavaozina taminy 27 Sep 2021
Fonosana tena tsara an'ny teratany Boeing 737-400 FSX / P3D nataon'i Eric Cantu / Eagle Rotorcraft Simulation miaraka amin'ny vatan-kaonty virtoaly amin'ny lohahevitra Boeing 737 'Classic' nataon'i Speedird77. Anisan'izany ny aty iraisam-pirenena 17.
Amin'ny alàlan'ny modely Native avy amin'i Eric Cantu / Eagle Rotorcraft Simulasi miaraka amin'i Boeing 737 VC misy foto-kevitra V Speed ​​nataon'i Speedird77
Noforonina 26 Sep 2021
Nohavaozina taminy 26 Sep 2021
Seranam-piaramanidina mpiambina an-dranomasina Beriev Be-6 (NATO: MADGE). Novokarina teo anelanelan'ny 1949 sy 1957, niasa tamin'ny AVMF hatramin'ny faran'ny taona 1960, PLAN ary Polar Aviation hatramin'ny taona 1970.
Noforonina 23 Sep 2021
Nohavaozina taminy 23 Sep 2021
Ahitana sary-tena misy sary + Volapoky ny seranam-piaramanidina + Toerana marina + fiara eny ambonin'ny tany + tontolo iainana + Trano + jiro, sns.
Noforonina 16 May 2021
Nohavaozina taminy 16 May 2021
Ity no fanangonana ny atidoha mahazatra McDonnell Douglas DC10-30 V3. Miorina amin'ny maodelin'i Thomas Ruth sy Eric Cantu, misy Airfile mihabe vaovao ary 2D / 3D Panel V3 nohatsaraina miaraka amin'ny refy voasoratra feno tanteraka.
Gloster Meteor T Mk7 miaraka amin'ny rambony F Mk8. Ity dia modely feno napetraka ao anatin'izany ny vatan-kaonty virtoaly sy ny feo, ary koa ny drafitra fandokoana valo feno pitsopitsony.
Noforonina 31 Mar 2021
Nohavaozina taminy 31 Mar 2021
Fonosana faran'izay tsara natolotr'i Flanker256 (fisaorana lehibe ho azy noho ny asa nomena). Ity pack Boeing 727-100 mega-pack ity dia misy maodely 8 an'ny mpandeha sy maodely miisa 2 an'ny kargo noforonin'i TDS / Tenkuu Developers Studio + ilay koba-maso 727 virtoaly nataon'i Thomas Ruth sy ny atiny 32 HD.
McDonnell Douglas F-15 Eagle kinova C sy D tsara indrindra noforonin'i IRIS Simulasi tamin'ny voalohany ary navadika ho zanatany FSX endrika endrika "ignoti et quasi occulti". Miaraka amin'ny effets otran'ny tohotra mena avy eo nampian'i Rikoooo.
Noforonina 26 Mar 2021
Nohavaozina taminy 27 Mar 2021
Noforonina 18 Mar 2021
Nohavaozina taminy 25 Mar 2021
Ity fonosana ity dia misy atiny 12 noforonin'i Stephen Browning. Ahitana koba virtoaly misy kabine 3D feno, tontonana 2D, fandrefesana ary feo ihany koa. Modely teratany ho an'ny FSX ary mifanentana Prepar3D v4 sy v5.
Nampiany ny sanganasan'i Philippe Wallaert. Nanampy ny lisitra nomen'i Werner Schott. Modelin'i Milton Shupe, Mike Kelly, George Arana ary Sim-Outhouse. FSX fiovam-po avy any Eagle Rotorcraft Simulation. Ny firafitra rehetra avy amin'i stephen browning.
Noforonina 17 Mar 2021
ny fonosany dia misy ny atiny manan-tantara rehetra nanomboka ny taona 1971 ka hatramin'ny 2003, izany hoe ny aty feno valiny 15. Ny zava-baovao amin'ity fonosana ity dia ny fampidirana tontonana vaovao feno antsipiriany sy azo tanterahina miaraka amin'ny fandrefesana vaovao 100% ao amin'ny kokotrana virtoaly sy ny Panel 2D.
Mpanapoaka baomba Fokker T.5 FSX & P3D
Noforonina 23 Feb 2021
Nohavaozina taminy 23 Feb 2021
Ity misy fanehoana mahatalanjona an'ny Fokker T.5. Misaotra an'i Daan Kaasjager amin'ity asa mahafinaritra ity. Ny fanoloran-tena sy ny kalitao toy izany ho an'ny Freeware dia miavaka.
Nosoratan'i Daan Kaasjager - Dutcheeseblend
Noforonina 18 Feb 2021
Nohavaozina taminy 18 Feb 2021
Ny Pipistrelle Virus SW 80 dia eo anilan'ny ULM misy seza roa novokarin'ny orinasa Slovenian Pipistrel. Ny maodely aseho dia manana maotera 80 HP Rotax. Add-on notsapaina tamin'ny FSX fa mifanentana koa Prepar3D v1 hatramin'ny v5.
Nosoratan'i Patrick Le Luyer
Ity ny Junkers 52 Tri Package misy ati-ati telo miavaka izay misy amin'ny tena fiainana ary noforonin'i Stephen Browning (F-AZJU, 50G10, 2ZBF). teratany FSX modely ary mifanaraka amin'ny Prepar3D v1 hatramin'ny v5.
Avy amin'ny maodely Original nataon'i O.Fischer. Fiovan'ny modely nataon'i Bulbbulb2. Fanaraha-maso sy fanovana CFg nataon'i InDeepSchit. Repaints rehetra nataon'i Stephen Browning
Noforonina 16 Feb 2021
Complete fonosana for FSX ary Prepar3D (v1 ka hatramin'ny v5) an'ny avo lenta de Havilland Canada DHC-7 10 misy atidoha vaovao 10. Anisan'izany ihany koa ny koba virtoaly feno misy trano 3D, tontonana 2D, fandrefesana ary feo. Modely teratany ho an'ny FSX.
Nosoratan'i tontonana miasa nataon'i Philippe Wallaert. Nanampy ny lisitra nomen'i Werner Schott. Modelin'i Milton Shupe, Mike Kelly, George Arana ary Sim-Outhouse. FSX fiovam-po avy any Eagle Rotorcraft Simulation. Teknolojia vaovao rehetra avy amin'i stephen browning.
L-188 Electra Airtanker fonosana FSX & P3D
Noforonina 26 Nov 2020
Nohavaozina taminy 26 Nov 2020
Ity fonosana mahafinaritra ity dia misy teratany 2 FSX fiaramanidina (mpandeha sy entana) miaraka amina atiny roa; Fiaramanidina Air Spray T-481 ho an'ny L-188C (AT) ary hatry ny Conair T-60 ho an'ny L-188C (F). Ireo atiny roa ireo dia noforonin'i Nicholas Mitchell. Amin'ny endriny 4K rehetra.
Avy amin'ny maodely Original an'ny Team FS KBT. Fiovam-po sy fonosana nataon'i Nicholas Mitchell. Fanamboarana sy fanatsarana nataon'i Rikoooo
Grumman S2 Turbo California Dept an'ny ala FSX & P3D
Noforonina 23 Oct 2020
Nohavaozina taminy 23 Oct 2020
Milton Shupe sy ny ekipany dia manolotra anay indray, kalitao iray add-on ho an'i Simmers izay maniry hampihatra fanaovan-tsoa amin'ny famonoana afo. Ny Grumman S2 Turbo avy amin'ny Departemantan'ny Ala sy ny Fiarovana Afo any California no kandidà tonga lafatra.
Nosoratan'i Milton Shupe, Scott Thomas, Tom Fliger, Nigel Richards, Rachel Whiteford, ary Jan Visser noforonina ho mpanamory fiaramanidina.
Noforonina 21 Oct 2020
Nohavaozina taminy 21 Oct 2020
Ny Blackburn Beverley dia fitaterana olona efa-joro, salantsalany avo lenta. Ny sidina voalohany dia natao tamin'ny Jona 1953 ary fiaramanidina fito amby efapolo no natsangana.
Nosoratan'i Manfred Jahn
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 15 Valiny 1 - 19 amin'ny 270